Download Facebook Messenger Desktop Client Application - အရူးလေး ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Download Facebook Messenger Desktop Client Application
ဂျီတော့လိုပဲ ကွန်ပြူတာ desktops ပေါ်ကနေ လွယ်လွယ်ကူကူချက်လို့ ရမဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ အသုံးပြုပုံကတော့ ဂျီတော့နဲ့ အတူတူပါပဲ...
သား တော့သိပ်သိပ်ကြိုက် all in one ဆော့ဝဲတော့ရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်လေးကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ...
သူ့ ဝန်ဆောင်မှုလေးကို အောက်မှာပုံလေးတွေနဲ့ ပြထားပါတယ် ကြည့်ကြည့်ပေါ့
Installation Steps for Facebook Messenger:
မြန်မာစာရေးတဲ့အခါ နည်းနည်းပြဿနာ ရှိပါတယ် အောက်မှာကြည့်ကြည့်ပေါ့ အပေါ်ပုံထဲကလို စာရေးရင် ဇော်ဂျီဖောင့် ဟာ လေးထောင့် လေးပေါ်နေတယ်ကိုယ်ရေးနေတာကိုပြန်ဖတ်လို့ မရဘူး .. ရေးပြီးလို့ ပို့ လိုက်ရင် ပြန်ဖတ်လို့ ရတယ် မြင်ရတယ်
f ကိုright click ရင် အောက်ကအတိုင်း
စိတ်ဝင်ချားသူတွေကတော့အောက်မှာ ဆွဲပေတော့ ဗျာ
As of now the application only supports 32 bits operating systems and it might create some problems in the 64 bit operating systems.
Download facebook messenger desktop client here.
+ မှတ်ချက် +4မှတ်ချက်
နတ်သားလေး ကျေးဇူးတော.တင်ချင်တယ်ဗျာ ဒါပေမယ်. မြန်ာ မာ font နဲ. ပတ်သတ်ပြီ တင် ထားတာက စာနဲ. ရေပြ ရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်။ ပုံ က မပေါ် ဘူးဗျာ။ ကူ ညီနိုင် ရင် ကူ ညီပါအုန်း
25 May 2012 at 08:52
နတ်သားလေးရေ firefox ခင်ဗျားတင်ထားတဲ. facebook messenger နဲ. ပတ်သတ်တဲ. ပုံတွေ က မပေါ်ဘူး ဗျာ။ လုပ်ပါအုန်း ဆရာရေ.
25 May 2012 at 23:17
ပုံမမြင်ရတော. အလကားဖြစ်နေပြီ နတ်သား အစုတ်ပလုပ်ရဲ.